Fidinana tany Mahajanga | Primature
Mahazoarivo, ny 05 Janoary 2019 – Manoloana ny fiakaran’ny rano izay nateraky ny orana nikija nandritra ny efatra andro tao Mahajanga, dia nidina tany an-toerana ny sabotsy 04 janoary teo, ny iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nitsidika ireo traboina avy amin’ny fokontany dimy izay tena nitondra faisana noho ny rano be ka nafindra amin’ny toerana azo antoka na « site d’hébergement » miisa telo ny delegasiona.
Nijery ny zava-misy mba ahafahana mitondra vahaolana maika sy ahafahana mandinika sy mametraka vahaolana maharitra hisorohana ny fiverenan’ny tranga tahaka izao, ary nitondra ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ihany koa. Taorian’izay dia nisy ny fivoriana niarahan’ny delegasiona tamin’ireo solontenam-panjakana sy tompon’andraikitra isan-tsokajiny miasa ao Mahajanga.
Tapaka ary fa hisy tantsoroka ho fanadiovana ny lakandrano rehetra izay tsentsina ka mahatonga ny rano miandrona ary maha-dobo ireo faritra iva ao Mahajanga, ary hisorohana ny mety ho fahatondrahana amin’ny fokontany hafa. Vahaolana vonjimaika ihany anefa izany hoy ny Praiminisitra fa ny tsirairay no tompon’antoka amin’ny ezaka fanadiovana sy fidiovana mba tsy haha-tsentsina ireny lakandrano ireny. Araka izany dia nanentana ny rehetra mba hanaja ireo rindran-damina misy izy, ka tsy hanary fako eny rehetra eny fa amin’ireo toerana voatokana ho amin’izany. Nojerena manokana ihany koa ny lafiny fahasalamana, satria amin’ny fotoana isian’ny rano be tahaka izao dia mora mihanaka ny valanaretina isan-karazany.
Manaraka izay dia misy ny komity manokana napetraka, handinika vahaolana maharitra ka isan’izany ny fijerena fomba hametrahana fotodrafitrasa fanamorana ny fampandehanan-drano. Ireo tompon’andraiki-panjakana ao Mahajanga sy ireo rantsa-mangaikan’ny fanjakana voakasika amin’ny fiatrehana ny loza no mandrafitra ity komity ity.
Farany, dia naneho fankasitrahana ireo tompon’andraikitra rehetra ao Mahajanga noho ny fandraisan’izy ireo andraikitra avy hatrany amin’ny fiatrehana ny loza ny Praiminisitra, toy ny famindrana ireo traboina any amin’ny toerana azo antoka, ny fahaizan’izy ireo nitsinjara ireo sakafo (vivres) ho an’ny traboina ary indrindra ny fahafahana nametraka ny fandriampahalemana amin’ny toerana nialan’ireo olona nafindra toerana ireo.
← Fivoriana ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo
Fitsidihana ny Etamazaoro →
Dinikasa fametrahana ny fomba fiasa vaovao eo anivon’ny Ministera mba hihatra mivantana amin’ny vahoaka ireo asa atao